Bahleli kubugoxo abantu eKosovo | News24
Bahleli kubugoxo abantu eKosovo
Inkunkuma ilahlwe ngaphandle kwe container ecalweni kwendlela iEisleben Umfanekiso: UNATHI OBOSE
Bahleli ebugxwayibeni abahlali baseKosovo, eSamora Machel, emva kokuba inkampani ibicoca kulandawo iye yayeka kwinyanga ephelileyo, emva kokuphela kwesivumelano sengqesho neSixeko saseKapa.
Oku kukhokelele kongcoliseko olumandla nolubanga inkxalabo kubahlali.
Umhlali Nomzamo Loli utyhole ngelithi yiveki yesibini inkunkuma ingaqokelelwa.
“Andazi ukuba kuqhubeka ntoni, ndibona nje ukuba inkunkuma ingcwele yonke indawo,” utshilo. “Napha kweza-container zigcina inkunkuma abahlali bayilahla nje akusekho nababantu baqhele ukuyiqokelela.”
U-Loli woleke ngelithi akukho nomntu okanye ilungu lekomiti elibaxelelayo bengabahlali ukuba kwenzeka ntoni. Uchaze ubomi babo njengobusemngcuphekweni wokonganyelwa zizifo yile nyhunyhu bahlala kuyo.
“Singenelwa ziimpuku neempukane ezihokini ngenxa yalo dothi ulahlwa nje. Nezinja nazo zifike zivule eziplastiki zinokutya,” ukhalaze watsho.
Wongeza ngelithi nabantwana babo bayachaphazeleka kuba badlala kule nkunkuma.
Uceba wendawo uSiphiwo Nqamnduku uthe unolwazi ngenkunkuma engaqokelelwayo.
Woleka ngelithi zikhona nezinye iingingqi ezichaphazelekileyo ezifana nePhola Park kunye ne Phantsi koCingo, eLower Crossroads.
“Ingxaki ikwisixeko saseKapa, siso esirhuqa iinyawo malunga nokuqesha inkampani yokucoca entsha. Bekufanele ukuba inkamapni entsha iqale ngomhla wokuqala kule nyanga imiyo kodwa akwenzekanga ngenxa yobuceducedu bangaphakathi ,” utyhole watsho uNqamnduku.
Wongeze ngelithi ebezicelile izikhulu zeSixeko saseKapa ukuba zizise ilori izokuqokelela le ikhoyo inkunkuma kodwa akhange bavume. Uthe akaqinisekanga ukuba kuzoqalwa nini ukusetyenzwa ngoba naye usebumnyameni.
“Lo mcimbi wokuqesha uthatha ixesha ngoba kaloku kuye kutsalwe amagama abantu abahlala kulongingqi ekuzobe kusetyenzwa kuyo. Emva koko asiwe ezikomitini zalondawo ukuze ziwabone zivume ukuba ziyavuma,” ucacise watsho.
U_Nqamnduku wongeze ngelithi ngamanye amaxesha kukhe kuphikiswane lonto yenze ukuba izinto zingahambi njengokuba bekucwangcisiwe.